သက်ဝေ: ပုဝါတစ်ထည် အမြန် အလိုရှိသည်
Posted by သက်ဝေ at 5:30 PM
မြသွေးနီ May 9, 2013 at 5:40 PM
ဟင့်...တစ်နေ့ကပဲ အဲ့လိုစည်းဖို့ ပုဝါတစ်ထည် ၀ယ်ခဲ့မိရဲ့..။ အဆီတထပ် အသားတထပ်နဲ့ ဘူဇွာလို ၀နေတဲ့ လည်ပင်းထဲများ ပါနေလေရော့မလား...
တွေးရင်း လည်ပင်းလေးကို ယောင်ယမ်း လက်နဲ့အုပ်လိုက်မိပါရဲ့... :)
ကျော်ညိုသွေး May 9, 2013 at 5:42 PM
ပုဝါတစ်ထည် လက်ဆောင်ပေးမယ် နော် :D
I like ur writing Ma Ma Thet Wai :)
tin min htet May 9, 2013 at 6:30 PM
မေဓာဝီ May 9, 2013 at 9:50 PM
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခင်ယုမေက သူ့လည်ပင်းက အရေးအကြောင်းတွေ ကာကွယ်ဖို့ ပုဝါလေး စည်းတာက စတိုင်တခုလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
မေသန်းနုလဲ အသက် သိပ်မကြီးခင်ကတည်းက လည်ပင်းမှာ အရစ်လေးတွေ ပေါ်နေတာ သတိထားမိတယ်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ လည်တိုင်ကျော့ရှင်းလေးတွေကို သဘောကျမိပေမယ့် ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် သတိမထားမိတာ အမှန်ပဲ အမသက်ဝေရေ ... ။ အမပြောမှ ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် မှန်ကြည့်ရင် သတိထားကြည့်ရအုံးမယ်။ :)
Min May 9, 2013 at 10:35 PM
That lady ~~ Ma KOM ? :) If I am not wrong, you mentioned that Ma KOM used to wear scarf :)
Hmoo May 10, 2013 at 2:03 AM
Anonymous May 10, 2013 at 5:45 AM
အခန်းမီး ထဖွင့်ပြီး ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ပြန်ကြည့်ချင်တာဆိုတာ ဘာပြောကောင်းမလဲ ..ဟို ၂ ယောက်နိုးမစိုးလို့သာ...
တမီး ကကော ဘာလည်ပင်းလဲ သိဘူးး
ဇွန်မိုးစက် May 10, 2013 at 2:07 PM
အဲ... ဇွန့်လည်ပင်းက အရစ်တွေက နဂိုကတည်း ထင်ရှားပါဘိနဲ့ လေးဆယ်ကျော်ရင် ဘယ်လိုများ နေမလဲ မသိဘူး။ မမစာဖတ်နေရင်း မမြင်ရသေးတဲ့ ကိုယ့်လည်တိုင်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်မှန်းဆ မြင်ယောင်ကြည့်မိသွားတယ်။ :D
ရေးထားပုံလေး ကြိုက်တယ် အစ်မ။း))
တထည် မက အဆင့်သင် ရှိပါတယ်
ကြည်ဖြူပိုင် May 10, 2013 at 11:32 PM
အနော့်လည်ပင်းလည်း ကြက်ခြေထောက်လား ဆင်နှာမောင်းလား
သေချာတာကတော့ အဆီတထစ် အသားတစ်ထစ်ပဲ
မိုးငွေ့........ May 11, 2013 at 1:17 PM
ပုဝါတွေဝေမယ် ဝေမယ် မီးမီးဝယ်သိမ်းထားတာ အများကြီး ခုတော့မလိုအပ်သေးဘူးပေါ့
မိုးငွေ့........ May 11, 2013 at 1:21 PM
အော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ် Yoga ကစားပါ အသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိ လည်ပင်အရေအကြောင်းမပေါ်ဘူး လည်ပင်းလေ့ကျင့်ခန်းရှိတယ်...။ ပါးကို အားကုန်ဖေါင်းထားပြီး အပေါ်ကို မော့နိုင်သလောက်မော့ကြည့် လေးငါးစက္ကန့်လောက်ပေါ့ ပြီးရင် မေးစေ့ကို ရင်ဘတ်နဲ့ထအောင်အောက်ပြန်ငုံ့ချ အဲဒါမျိုး တစ်နေ့ကို ဆယ်ကြိမ်လောက်လုပ်နိုင်ရင် အိုကေပြီ အစ်မ
Anonymous May 11, 2013 at 11:04 PM
I really like this writing style.
It is so entertaining.
By the way, I like " pa war" especially after arriving in the US.
May be it is because I wanna hide my neck or that the weather is cold, or both.
တန်ခူး May 11, 2013 at 11:29 PM
ရေးပုံလေးလှလိုက်တာ. ဇရာကို လည်ပင်းနဲ့ ပုံဖော်သွားတာ. ဒီပို့ စ်ဖတ်ပြီး အပြင်ထွက်တိုင်းပုဝါလေးပတ်သွားရမလားလို့ စဉ်းစားမိတော့တယ်. သက်ဝေအတွက် တထည်ပိုဝယ်ခဲ့မယ်နော်.
သက်ဝေ May 12, 2013 at 10:57 AM
ရေးးးးးးးးး ပုဝါ လက်ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေရော... ပုဝါတွေ အများကြီး ပိုင်တဲ့သူတွေရော တွေ့ရပြီ... ပျော်စရာကြီး...
အခုလို ဘလော့လောကကြီး အေးစက်စက် ဖြစ်နေချိန်မှာ
စာလာဖတ်ကြတာ ကော်မန့်လေးတွေ ရေးသွားကြတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
စာဆက်ရေးဖို့လည်း အားတက်မိပါတယ်... Love you all... :-)
နွေလ May 12, 2013 at 12:20 PM
အသက်ကို တော်တော်လေး ဂရုစိုက်ကြတယ်နော် အစ်မ
အင်း ... ဘယ်မိန်းမတွေများ လည်ပင်း ပဝါပတ်ထားလဲ
လိုက်ကြည့်ရဦးမယ် ... ပဝါပတ်ထားလို့ကတော့
သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဘယ်လောက်နုနု အသက်လေးဆယ်ပဲ
ဟဲဟဲ ... အမေနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 13, 2013 at 3:12 AM
ပုဝါကို ဘာကြောင့်ကြိုက်မှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိခဲ့ဘူး
ဒီစာလေးဖတ်မိတော့မှ ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ အဖြေပေါ်တော့တယ်
Richsmile October 4, 2013 at 10:11 AM
ရင်ခုန်စရာသနပ်ခါးနံ့ လေးတွေနဲ့ ...........
Richsmile October 4, 2013 at 10:12 AM